Mootummaan Eertiraa Itoophiyaan lolaa guddaaf nutti kophaahuutti jirti jedhee Tokkummaa Mootummootaatti himate - Oromia Shall be Free
Ambaasaadder Girmaa AsmeroomTokkummaa Mootummaatti ambaasaaddera Eertiraa
WASHINGTON,DC — Lola Eertiraa fi Itoophiyaa ka dhiyoo tana daarii Tsorenaa irratti wal hadhan jedhan irratti nama hedduutti dhumate.Jari ilachuu ebelutti qaraa lole jedhee balleessaan wal himata.
Tsorenaan irratti wal hadhan jedhan tun Asmaraa gama Kaabaatin jirti.Akka bakka bu’aan mootummaa Eertiraa Tokkummaa Mootummootaa, ambaasaadder Girmaa Asmeroom jedhutti Itoophiyaan seera nyaaphummaa Eertiraa irratti baafattee qabdi.
Ragaan jiru akka ambaasaadder Girmaan jedhutti dubbii bulchootii Itoophiyaa ‘Eertiraa lolla, mootummaa sun jijjiira’ jedhanii paarlaamaa irratti dubbatan jedhee VOA-tti hime.
Itoophiyaan ammoo wannii Eertiraan jette dhara jetti.Akka ambasaadderi Itoophiya Tokkummaa Mootummootaa Tekeda Alemu VOA-tti himetti dubbiin Eeritiraa tun dharaa deebii kennanii miti.
Ambaasaadder Tekeda Alemu
Isuma mootummaan Eertiraa waan manii murtii mirga namaa Tokkummaan Mootummootaa isiin himatee deebii kennuuf muddamee ykn cinqamee akkana tahaa jedha,ambaasaadderii Itoophiyaa.
Koomishiinii Qorannoo Tokkummaa Mootummootaa Eeritiraan ummata kuma 400 garboomfattee harkaa qabdii manii murtii addunyaa(ICC) dubbii tana laaluu malee jedhee dabarse.Eeritiraan ammoo dubbii tana hin fudhanne.
Lola Itoophiyaa fi Eerrtiraa bara 1998-2000, ganna 16 duraa irratti nama kuma hedduutti irratti dhumate.Jarii lachuu ammallee lolla akka hin feene dubbachumatti jiran.
Previous Members of Team Ethiopia hold #OromoProtests at 20th African Athletics Championships in South Africa | June 22, 2016
Next Dhiiga ilmaan Oromoo jigsaa dachii Oromiyaatirra bilisaan bashannanuun gonkumaa hin hayyamamu.